Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 11
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 11
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 11
Ruka akanamata munamato uyu une mbiri.
RUKA 11:2 Akati kwavari: kana muchinyengetera, muti: baba zita renyu ngarikudzwe novutsvene; vushe bwenyu ngabwuvuye;
3 Mutipei zuva rimwe nerimwe zvokudya zvedu zvinotiringana;
4 Mutikanganwire zvivi zvedu, nokuti nesu tinokanganwira vose vanemhosva nesu; musatiisa pakuidzwa.
Ruka anotizivisa Kristu semunhu.
Ruka anomirira ipapo tisati tasvika pamapeto pemunamato waBaba vedu nekuti chikamu chekutanga ichi chinomiririra isu vanhu. Tinoda kuti Mwari ari Kudenga aite kuti zvinoitika panyika zvifambirane nehurongwa hwake kumusoro Kudenga. (Kwete nezvido zvedu zvekuzvifadza isu). Mwari anofanira kutipa chekudya nekutiregerera (Isuwo tinofanirawo kuregerera vanotitadzira) uye Mwari anofanira kutibatsirawo kubva pakuyedzwa (patinobvuma kuti takaneta kwazvo uye tinowira zviri nyore mumiyedzo). Saka munamato uyu unotsamangurakuvimba kwedu kwakazara naMwari.
Ruka anotaura pamusoro pezviitiko zviri muvanhu. Chikamu chekupedzisira chemunamato, chinosiiwa naRuka, chinotaura nezvaMwari iye oga sezvo chine humambo uye Simba nekukudzwa nekusingaperi. (Zano raMwari rinorarama nekusingaperi, kwete kuzvinhu zvenguva duku zvatinonyanya kunamatira).
Ruka anonyora pamusoro pechikamu cheMunhu Jesu uyu kuti isu vanhu tingawadzane naye sei.
Isu vanhu tingaite sei kuti minamato yedu ishande?
Jesu anoti tinofanira kukumbira nekutsungirira kana tichisvika pamberi paMwari tichida chimwe chinhu.
LUKE 11:9 Ndinoti kwamuri: Kumbirai, muchapiwa; tsvakai, muchawana; gogodzai, muchazarurirwa.
10 Nokuti umwe noumwe unokumbira, unopiwa; unotsvaga, unowana; nounogogodza uchazarurirwa.
13 Naizvozvo kana imi makaipa muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka, baba venyu vari kudenga vachapa zvikuru sei Mweya Mutsvene vanokumbira kwaari.
Mwari anodaira minamato nenzira yakanaka. Zvinoreva kuti kana akasadaira zvatinokumbira, tiri kukumbira zvinhu zvisiri izvo zvinokwanisa kutikuvadza neimwe nzira.
Tinofanira kuva nekugutsikana kwakazara musarudzo dzaMwari munzira dzaanodaira nadzo minamato yedu.
Ruka anotarisana nedambudziko guru rine vanhu apo tinotendera mweya yakaipa kutizadza.
Jesu akasarudza munhu aive mbeveve asingatauri.
Jesu akaburitsa mweya wakaipa waive mumbeveve pakangogona munhu uyu kutaura, vanhu vakabva vapomera Jesu kuti aive Beerzeburi, mukuru wemweya yakaipa.
RUKA 11:14 Zvino wakanga achibudisa mweya wakaipa waive mumbeveve, mweya wakaipa ukati wabva, mbeveve ikataura: vanhu vazhinji vakashamiswa.
17 Zvino iye wakati achiziva kufunga kwavo, akati kwavari: Vushe bwumwe nobwumwe bwunozvipesanisa, bwunoparadzwa; neimba inopesana neimba inowa.
18 NaSatani kana achizvipesanisa, vushe bwake bwungamira seiko; zvamunoti, ndinobudisa mweya yakaipa naBeerzebiri?
Kana Satani achiburitsa mweya yake yakaipa, vushe hwake hunozvipesanisa haungararami.
Jesu akati akasimba kukunda Satani saka ane simba pamusoro paSatani.
Saka Jesu haangave Beerzeburi kana wakaipa nekuti ane simba rakakura kwazvo kukunda Satani.
Kune rutivi rwakaipa, mweya yakaipa inoteerera Satani. Kune rutivi rwakanaka, isu vanhu tinofanira kuteerera nekuda Jesu.
Kana tisiri naye paanozadzisa hurongwa hwaMwari, kushingirira kwedu hakuna maturo, kunyange tichiti tiri kuita zvakanaka, sezvo kushingirira kwedu kunozongoparadza zviri kuvakwa naMwari.
Kana mweya wakaipa ukabudiswa mumunhu munhu iyeye anofanira kubatira Mwari akatendeka. Kana munhu iyeye akatendera mweya wakaipa kudzoka maari zvakare, mweya iwoyo unodzoka neimwe mweya yakaipa minomwe.
Nei ichiuya yava minomwe?
RUKA 11:24 Mweya wetsina kana wabuda kumunhu, unopota nenzvimbo dzakawoma, uchitsvaka zororo; kana ukashaiwa, unoti: ndichadzokera kumba kwangu kwandabuda.
Kana munhu akasangana nechokwadi munguva yekereke yekupedzisira chekuti kune muprofita wenguva yekupedzisira anofanira kutidzosera kudzidziso dzeMagwaro dzekereke yeTestamente Itsva, zvino mweya wemasangano unobva kwaari sezvo zvitendero zvemasangano hazvigoni kurarama pamwe neBhaibheri.
Semuenzaniso hamukwanisi kuwana Magwaro anoti vazivi vakapinda muchidyiro. (Nokuti vakapinda mumba). Hakunawo Magwaro anoti vakapfugama vakanamata rusvava. (Aive ava Mwana). Bhaibheri harina kubvira ratiudza kuti tirangarire kuzvarwa kwake. 25 Zvita izuva risina kunyorwa muBhaibheri. Kisimusi harisi izwi rakanyorwa muBhaibheri. Muti wekisimusi hauna chekuita nemuchidyiro maakaberekerwa. (Izwi rekuti “Santa” kana mukabvisa “n” pakati mukamuisa kwekupedzisira rinoburitsa izwi rekuti “Satan”). Saka kana munhu achida kurarama maererano neBhaibheri, havangayanani nekuzvipira kunguva yeKisimusi kunoitwa mumasangano.
RUKA 11:25 Kana wasvika unoiwana yatsvairwa, yanatswa.
Munhu, anoramba tsika dzemasangano dzakaitwa nevanhu, otanga kutevera nekutenda Bhaibheri zvizere, anonatsirwa nekururamisirwa odzidza kuti anganzwisisa sei kuzivisa kuzara kwevuMwari, rubapatidzo rwemvura, nguva nomwe dzemakereke, chivi chekutanga nezvimwewo, achishandisa mavhesi emuBhabheri chete.
Zvino, zvinosuwisa, kuti Magwaro ari kurambwa pasi pehutungamiri hwevaparidzi nevafundisi vakanaka. Munhu anotanga kudzidza “zvese” pamusoro pezvakataurwa nekutinhira kunomwe uye “zita itsva” raJesu. Vanodzidzawo kuti Jesu akauya (kana kuti akaonekwa) segore muna 1963 pamusoro perenje kuFkagstaff, kuAmerica. Gore iri raive makiromita 42 mudenga rinotorwa kuva Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chaputa 10 anouya kuzomira panyika nemugungwa. William Branham ainzi aifanira kuva ari pasi pegore iri parakatorwa mifanainidzo, kunyangwe nguva yekuvhima yaive isati yatanga, saka nekudaro aive sitomboripo musi iwoyo.
Vateveri vake vanosanganisa mashoko aakataura, vomhura Magwaro vorarama nefungidziro idzi uye kuyedzwa kwepfungwa. Vanotsamwa kwazvo kana ukasawirirana navo kana kuti ukavavhurira mavhesi emuBhabheri anorwisa zvavanotenda. Asi William Branham pachake akataurawo mamwe mashoko akawanda anorwisa zvavanotaura izvi.
Panguva inotanga munhu kutenda tsananguro idzi dzose, dzisingatsigirwi nekubatanidza Gwaro neGwaro, vanenge vatokanganisika kukunda zvavaive vari vachiri mumasangano. William Branham aiti hushumiri hwake hwaivepo kutidzosera pakutenda kwekereke yekutanga yeTestamente Itsva, zvinhu izvi zvose hazvina kumboonekwa pakereke yekutanga. Kana chero kereke imwe yemuTestamente Itsva yakatongwa nemufundisi, zvisinei nekugona, kana kururama kwaangave nako.
RUKA 11:26 Ipapo unoenda, ndokundotora imwe mweya minomwe inoukunda nokuipa, ndokupinda, ndokugara’mo; kuguma kwomunhu uyu kwakaipa kupfuvura kutanga kwake.
Pane mukana wekuti muKristu wemasangano adzidze chokwadi kubva padzidziso dzaWilliam Branham. Asi, mumashure mekubuda musangano nekudzidza chokwadi kubva muBhaibheri, munhu nhasi uno anoita seanonyengerwa uye kumanikidzwa kuti atende kuti mazwi akataurwa akaiswa pamwechete zvakachenjera ichokwadi. Saka vanoramba Bhaibheri kechipiri, asi ndipo pavanenge vakufanira kuziva zviri nani, asi vanotevera mazwi akataurwa sehumbowo hwekuti “vari muMharidzo pachokwadi”. (zvisinei kuti izvi zvinorevei). Mumashure mekugamuchira kukanganisa kukuru uku kuti kupinde munjere dzavo dzemweya, vanenge vane mukana muduku kwazvo wekuti vasangane nechokwadi chaicho cheBhaibheri zvakare pamazuva atiri kurarama.
Saka “vanotenda Mharidzo’ vakazopatsanurana sei kuva nezvitendero zvinorwisana kudaro?
Nekuti kune mweya yakaipa inonyengera kubva munguva dzose dzemakereke manomwe yakasunungurwa munguva yedu yekereke yekupedzisira.
Mweya minomwe inomiririra mweya inobva munguva nomwe dzemakereke dzakasiyana.
Kana ukabuda musangano rekereke uchitarisira kudzokera pakutenda kwekereke yeTestamente Itsva, ipapo usatandera kuti mweya wemasangano upinde mauri zvakare. Vemasangano vazhinji havatsigiri zvavanotenda nekuyananisa mavhesi eBhaibheri pamwechete nenzira yekuti panosara pasina mamwe anoita seanorwisa mamwe.
Makereke anotongwa nevafundisi nedzidziso dzinovakwa pamazwi akabatwa achitaurwa mazuva ano uye kuturikirwa kwemazwi akataurwa zvaive zvisimo mukereke yekutanga yeTestamente Itsva.
Kana musingakwanisi kutsigira kutenda kwenyu neBhaibheri, ipapo munobva maziva kuti muri kutevera tsika dzevanhu dzinovhura musiwo kuti mweya wekutadza wenguva nomwe dzose dzemakereke upinde. Mweya iyi kana yasangana ine kuipa kukuru uye inotsvedza zvekuti imi neni hatingagoni kudzora kuita kwayo. Jesu oga, Shoko, ndiye anokwanisa kuita kuti igarire kure nehupenyu hwedu.
Mapoka “eMharidzo”, semasangano, havachateveri Magwaro oga. Asi mapoka “eveMharidzo” havana zvikonzero kuti nei vasisateveri vhesi nevhesi remuBhaibheri. Pakutanga vakadzidziswa kutenda zvaitendwa nekereke yekutanga, yaitevera Magwaro zvakazara.
Zvino, zvakadaro, kuti munhu arambe ari nhengo yeboka “reMharidzo” , vanotowana chikonzero chekupikisa wese anoda kuvaratidza kuti vangagare sei vachitevera Magwaro.
Nekupikisa chokwadi chinobva muBhaibheri unobva wazvibvisa pana Mwari zvakazara.
Nhorondo yekupa hupfumi kuvanhu mumaruwa inoratidza kuti kubva kwaiita vanobata muchikamu ichocho padzidziso dzaLenin, ndikowo kukura kwekusimudzira nekupembedza kwavaiita Lenin.
Zvimwechete zvinokwanisa kutaurwa pamusoro pemakereke “eMharidzo. Kubva zvakanyanya kwavakaita pakuedza kwaWilliam Branham kutidzosera kukereke yeTestamente Itsva, ndiko kunyanyawo kwavo kurumbidza William Branham uye kusimudzira zvaakataura kuzvifananidza kana kuti kuzviita zvakakosha kukunda Magwaro.
Zvino Ruka anotaura kuti mhuri dzatakaberekwa tiri hadzina chakanaka chadzinovaka kwatiri.
RUKA 11:27 Wakati areva saizvozvo, mumwe mukadzi pakati pavanhu wakadanidzira, akati kwaari: Rakaropafadzwa dumbu rakakutakurai, namazamu amakamwa.
Mukadzi uyu akati Maria akaropafadzwa kuva neMwanakomana akaita saye. Izvi zvinoreva kuti mhuri yepedyo yaJesu (kana muporofita) yaive iri pakanaka.
RUKA 11:28 Asi iye akati; Hon’o zvikuru vakaropafadzwa vanonzwa Shoko raMwari vachirichengeta.
Jesu akati “Kwete. Hakuna chakanaka chinowanikwa chemweya zvichibva pakuberekwa”.
Vanoropafadzwa pachokwadi ndeavo vanonzwa Bhaibheri vochengeta zvarinoreva. Avo vanorarama hupenyu hunodiwa neMagwaro, vachiparidza kubva muMagwaro, vasingabviri varwisa Magwaro.
Jesu akati kumuka kwake kubva kuvakafa ndicho chega chiratidzo chichapiwa nyika izere kuipa.
Ichi ndicho chiitiko chinoshamisa pazviitiko zvese zvakamboitika. Rufu ndiye muvengi wedu wekupedzisira. Hakuna mukuru wezvitendero ati akunda rufu akambodzoka kubva kumakuva. Chiitiko ichi ndicho chega cherudzi urwu.
Hakuna zvimwe zvitendero zvinokwikwidza kuchiitiko ichi. Kana vatadzi vasingafadzwi nekumuka kuvakafa, zvino hakuna chimwe chiitiko chingareva chinhu kwavari.
RUKA 11:31 Mambo weZasi uchamuka pakutongwa navarume vorudzi urwu, akavapa mhosva, nokuti wakabva pamigumo yenyika, kuzonzwa kuchenjera kwaSoromoni; tarirai, mukuru kuna Soromoni uri pano.
Mambokadzi weSheba akayambuka renje reSahara nekuda kunonzwa huchenjeri hunobva kuna Mwari hwaive hwapiwa Soromoni. Akashingirira kwazvo kuti asangane nechokwadi.
Saka isu tinofanira kuedza zvakaita sei kuti tiwane chokwadi cheShoko raMwari. Kugara zvakadakara tichitandadzwa mukereke musina anotenderwa kupikisa kunova chinhu chakaoma kwazvo inzira yakaoma uye inotyisa kuti ugosangana nechokwadi chakataurwa naJesu kuti chichavako.
RUKA 11:32 Varume veNinivi vachasimuka pakutonga norudzi urwu, vakarupa mhosva, nokuti vakatendevuka nokuparidza kwaJona; tarirai mukuru kuna Jona uri pano.
Ninivi iguta raive nekuipa kwazvo munguva dzese. Asi vanhu varo vakatendeuka.
Vainamata mwari wehove aidaidzwa kuti Dagon. Hove huru yakamedza Jona kwemazuva matatu, ikamusvipa mumahombe kombe egungwa. Mapegani akafadzwa nazvo. Jona aive amedzwa akutofungirwa kuti akafa kwemazuva matatu. Nekushamiswa mapegani akaona mwari wavo wehove, achionekwa kekutanga nekekupedzisira, achiuya kumahombekombe kwegungwa achisvikosvipa. Vakatarisa marutsi aisemesa aya vakafara kuti vaive vaunzirwa muporofita kubva mumuromo mamwari wavo wehove. Izvi zvaive zvakafanana nekumuka kubva kuvakafa. Mapegani vaive vasati vamboona zvakadaro. Uye havana kuzozviona zvakare. Saka vakamuteerera. Shoko pamusoro pechiitiko ichi rakapararira nekuNinivi saka vakateerera vose vakatendeuka. Muporofita “akamutswa kuvakafa uyu” akaita rumutsiridzo rukuru rwemuTestamente yekare apo mapegani 120 000 aive nekuipa kukuru akatendeuka.
Uku ndiko kwakava kuteerera kwavo neruremekedzo kumunhu aive amedzwa kwemazuva matatu, Jesu anotarisira kuti vanhu vasingatendi vagoremekedza kumuka kwake kubva kumakuva apo anofa musi weChishanu achizomuka musi weSvondo. Uku ndiko kwaive kutanga nekupedzisira kuti munhu aite zvakadaro.
Hatingade zvimwe zvratidzo zvinokunda izvi.
Kana akazvimutsa kubva kuvakafa zvino haangawane dambudziko pakutimutsawo isu kubva kuvakafa.
Kana tisingatendi kubva pakumuka kwake, takaipa kukunda vanhu veNinivi vakatenda mumashure mekunge Jona aita “mumvuri” werumuko.
Jesu ndiye akatanga kumhura vakuru vezvitendero.
Ruka anotaura chinhu chinosuwisa. Vakuru vezvitendero vanhu vakanaka. Vanofara, vanobatsira uye vanokurudzira vamwe. Asi mukuru umwe nemumwe anoita kuti vateveri vake vatende zvaanotaura iye. Parizvino kune masangano anosvika 30 000 akasiyana emasangano emakereke. Saka vakuru vezvitendero vanhu vakanaka, asi havana rubatsiro rukuru rwavanopa kana muchitsvaga chokwadi.
RUKA 11:37 Wakati achataura mumwe muFarise akakumbira kuti asvusvure naye; akapinda akagara pakudya.
38 Zvino muFarise akashamiswa, achivona kuti haana kumboshamba asati asvusvura.
Vakuru vemakereke vanopfeka zvakanaka, vanotyaira motokari dzakanaka, vachigara dzimba dzakanaka. Vanofema mufaro nehushamwari. Kuratidzika kwavo kunze kwakanakisa.
Asi kana mukanzvera dzidziso yesangano uye tsika dzavanodzidzisa, hadzitsigirwi neMagwaro. Saka Jesu anovaraira.
RUKA 11:39 Ishe akati kwaari: Zvino imi vaFarise munosuka kunze kwemukombe nendiro, asi mukati menyu muzere nokukara nokuipa.
Jesu akati vakuru vezvitendero sevaFarise vanozvishambidza kuti vaonekere kunze nemimhanzi yedhisiko mukereke nekuparidza kwakatsetseka kuti vafadze, asi mukati vanokara uye vakaipa. Havaratidziri kutenda kwekereke yekutanga. Vanorasikirwa nezvinzvimbo zvavo mukereke kana vakaita saizvozvo. Makamboruma apuru rakanaka kunze mozoona kuti mukati rakaora?
Izvi ndizvo zvinotaurwa naJesu pamusoro pevakuru vezvitendero.
RUKA 11:42 Asi munenhamo, imi vaFarise, nokuti munopa chegumi cheminte, neruyi nemirivo yose, muchirega kururamisira mhaka norudo kunaMwari; maifanira kuzviita izvi, nokusarega kuzviita.
Vakuru vemakereke vanotarisisa zvinhu zviduku kwazvo pachegumi, asi havana rudo neMagwaro kana kutsigira kutenda kwavo neBhaibheri. Vanhu vanoda Kisimusi, saka vaparidzi vanopupurira zuva risimo muBhaibheri iri nemuti wacho kuti varambe vari nembiri. Havambotauri kuti vazivi vakavigira Jesu zvipo zvitatu havana kubvira vapinda muchidyiro. Vakapinda mumba makore maviri mushure mekunge Jesu azvarwa. Asi vanhu vanoda zvipo zvakanyanya, saka vaparidzi mumasangano vanoramba vainembiri nekuisa vazivi muchidyiro. Chokwadi hachina kukosha kwavari. Asi kufadza vanhu ndiko kwakakosha.
Asi Bhaibheri ndiro rinotonga chokwadi. Kwete makaro nekuita kwevanhu vanongoda zvipo.
RUKA 11:43 Munenhamo, imi vaFarise, nokuti munoda zvigaro zvepamberi mumasinagoge, nokukwaziswa padare.
Vakuru vezvitendero vanoda zvigaro zvakakosha pamberi pekereke pavanoonekwa nekusimudzirwa munjere dzevanhu. Vafundisi vanoda kuzivikanwa pakazara vanhu, uye ndivo voga vaparidzi vanoda kumhoreswa nemazita ezvinzvimbo zvavo. Hamungoti “Ray”, munotofanira kuti “Mufundisi Ray”.
Jesu haana kufadzwa nazvo.
RUKA 11:44 Munenhamo, imi, nokuti makaita samarinda asingavonekwi; vanhu vanofamba pamusoro pawo vasingazivi.
Jesu akati vakuru vezvitendero vaive makuva aifamba. Vaive makuva asingavonekwi. Vaitungamirira vateveri vavo kunofawo. Kana mukasatevera Bhaibheri sezvariri, sezvakaitwa nekereke yekutanga, munenge makananga kunguva yeKutambudzika kukuru kunyangwe muri vakaponeswa. Kugamuchira Jesu seMuponesi kunoponesa kubva kuHadesi . Kubatira Mwari Mumweya nemuzvokwadi ndiko kunodiwa kuti tipunyuke nguva yeKutambudzika kukuru.
JOHANE 4:24 Mwari ndiMweya, vanomunamata, vanofanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi.
Kana Mwari azivisa chokwadi cheShoko rake, vanhu havana chikonzero chekuti vange vasingazivi. Kunze kwekunge tichida tsika dzekereke yedu nedzidziso dzakaitwa nevanhu kukunda kuda kwatinoita Bhaibheri.
Vaiita makuva akanaka kuitira vaprofita vavo, asi ndivo vaive vauraya vaprofita ivavo.
Vakuru vezvitendero havadi kurasikirwa nesimba, kutonga uye mukana wekubata mari.
RUKA 11:54 Vachimurindira, kuti vamubate paShoko rinobuda mumuromo make.
Vakuru vezvitendero vaida Jesu, Shoko, kuti afe.
Vakuru vezvitendero vaive vasingafambidzani neShoko raMwari.
Nedzimwe nzira vakuru vemakereke vakafanana nevatyairi vendege vanoba ndege vakatyaira vanhu kundofa muTwin Towers. Vanhu vakagara vakanyarara muzvigaro zvavo vachivimba kuti vatyairi vavo vachavasvitsa zvakanaka. Vachibva vangofa. Iyi yaive yambiro huru kwatiri tese. MaKristu haafaniri kungova vanhu vagere mubhazi vakamirira kuti mufundisi avasvitse kunzvimbo yavari kuenda. Rangarirai vasikana vanegumi vakarara.
VAFIRIPI 2:12 Naizvozvo vadikanwa vangu, sezvamakateerera nguva dzose, ndisati ndiripo bedzi, asi zvikuru zvino kana ndisisipo, pedzisai kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera.
Tinofanira kuteerera kudzidzisa kwaPauro. Kutendeuka kunotiponesa kubva kuHadesi. Ndekupi kumwe kuipa kwatinofanira kuponeswa kubva kwakuri? Tinofanira kuponeswa kubva pakutadza kwemakereke atinoenda. Kunyengera kwedzidziso netsika dzakaitwa nevanhu kunotisesedza tichirara apo vakuru vatungamiri vedu vanotitora kuenda munguva yekutambudzika kukuru.
Kana maKristu asina kugadzirira Kuuya kweChipiri kwaJesu, vachafa kufa kunorwadza munguva yeKutambudzika kukuru.